Bogga ugu weyn Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lacag Loogu Siin Karo In La Sameeyo Xaashiyaha Excel 2022
Miyaad wax badan ku samaynaysay Ms-Excel adiga oo aan wax fikrad ah ka haysan hababka ugu wanaagsan ee lacag laguugu siiyo si aad u samayso xaashiyaha heer sare ah? Hadday sidaas tahay, markaa maqaalkani waa adiga.
Xaashida xaashiyuhu waa aalad muhiim u ah xisaabinta xisaabta ee ku lug leh falanqaynta xogta tirakoobka, oo soo koobaysa tirooyinka tirooyinka dheer iyo sidoo kale boqolleyda iyo celceliska.
Isticmaalayaasha aan waayo -aragnimada lahayn, waxaa jira adeegsiyo badan oo loogu talagalay sheybaarada xaashiyaha halkaas oo shay kasta uu ku kala duwanaan karo ujeeddadiisa naqshadeynta. Intooda badan waxaa loogu talagalay in lagu beegsado xisaabin kala duwan oo ku saleysan kiisaska isticmaalka.
Guud ahaan, si kastaba ha ahaatee, xaashiyaha xaashiyaha ayaa ka dhiga xisaabinta iyo sidoo kale duruufaha gelitaanka xogta inay ka sahlan yihiin habab kale oo halkii buug ahaan ahaan jiray.
Isku soo wada duuboo, kobcinta xirfadaha xaashiyaha ayaa maalmahan u muuqda kuwo dhaqaale ahaan waxtar u leh maaddaama xirfadahaan si aad ah loogu raadinayo tiro ka mid ah riwaayadaha madaxa -bannaan ee internetka.
Waxaad ka heli doontaa xoogaa ka mid ah xulashooyinkaan cutubyada soo socda iyo cinwaan -hoosaadyada.
Mid ma heli karaa Shaqooyin leh Excel?
Waxaad u badan tahay inaad gelisay waqti iyo agab barashada xirfadaha qaarkood heer sare ama xaashi kasta, hadda waa waqtigii aad raadin lahayd shaqooyin cusub.
Uma baahnid inaad tiraahdo, waxaad sidoo kale u hamuun qabtaa inaad ogaato sida lacag laguu siin karo si aad u samayso xaashiyaha heer sare ah.
Si lagaaga caawiyo inaad tan dhammayso, waxaa lagula talinayaa inaad ku darto xaqiiqda ah inaad hadda xirfad u leedahay xirfadaha Microsoft Excel; tusaale ahaan, muuqaalkaaga dib u bilow.
Waxaa laga yaabaa, waaxaha xisaabaadka iyo shirkaduhu inay ka faa'iidaystaan ​​fursadaha ugu weyn ee dadka xirfadda u leh falanqaynta xaashiyaha si ay lacag u helaan si ay u sameeyaan xaashiyaha heer sare ah.
Sida laga soo xigtay daraasadihii ugu dambeeyay:
82% shaqooyinka maanta waxay u baahan yihiin xirfado ama waayo -aragnimo Excel iyo software -soo -saarka.
Xirfadaha Excel ee la aqoonsan yahay waxay celcelis ahaan kordhin karaan awoodda kasbashada qofka 12%.
Xitaa haddii aadan ahayn kuwa haysta shahaadada, xirfadahaaga Excel waxay albaabka u furi karaan shaqooyin iyo xirfado badan.
Si kastaba ha noqotee, markaad bilowdo raadinta shaqooyinka ku lug leh xirfadaha xaashiyaha sare, waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay inaad sahamiso weedhaha raadinta soo socda kuwa kale:
Shaqooyinka xaashiyaha waraaqaha ee guriga
Ku kasbado mashaariic heer sare ah
Faa'iidooyinka xaashiyaha Excel laga bilaabo waqti-dhiman guriga
Shaqo sare oo onlayn ah si aad lacag u hesho
Intaa waxaa dheer, doorarka shaqo ee caadiga ah ee lagu siin karo lacag si aad u samayso xaashiyaha sare waxaa ka mid ah:
Halkan, waxaa lagaa rabaa inaad qabato hawlo kala duwan sida samaynta xaashiyaha, jadwalka ballamaha, abaabulka dukumiintiyo kala duwan, gelinta waqtiga fasaxa shaqaalaha, iwm.
Waxay u badan tahay inaan laguu tixgelin doonin doorkan shahaado la'aan. Tani waxay tiri, maareynta tibaaxyo maaliyadeed oo kala duwan, soo gudbinta canshuur celinta, mas'uul ka ah bayaannada dakhliga iyo socodsiinta lacagta caddaanka ah, iwm waa qaar ka mid ah waajibaadkaaga.
Qiimeeyaha Qiimaha iyo/ama Falanqeeyaha Maaliyadeed
Halkan, waxaad u adeegsan doontaa xirfado heer sare ah si aad u taageerto qandaraaslayaasha mashruuca dhismaha iyo maareeyayaasha qiyaasaha lacagta, waqtiga, iyo shaqada loo baahan yahay si loo dhammeeyo mid kasta oo ka mid ah mashaariicdooda. Shahaado iyo waayo -aragnimo dhisme oo habboon ayaa loo baahan doonaa.
Intee in le'eg ayaan ku dallacayaa inaan sameeyo Xaashida Xaashida?
Ku -dallacidda habboon ee wax kasta oo dhib ah waligeed ma sahlana oo marka la tixgelinayo siyaabaha lacag lagu helo si loo sameeyo xaashiyaha heer sare ah, tani waxay noqon kartaa arrin.
Waxaa jira habab badan oo lagu qiimeeyo mugga shaqada ee ku lugta leh dhammaystirka shaqada xaashida sida shaqo kasta oo kale. In kasta oo hababka qaarkood ay u baahan yihiin lacag ku -dallacid saacaddiiba, kuwa kale si fudud ayaa loo qiimeeyaa mashruuc kasta.
Si kastaba ha noqotee, haddii aadan hubin inta ay shaqadu qaadan karto, sharadkaaga ugu fiican wuxuu noqon doonaa inaad la socoto qiime saacadle ah.
Intaad ku jirto, hubi inaad la xiriirto macmiilka inta badan haddii loo baahdo inaad hore uga digto biilka dheeraadka ah ee iman kara. Habkan, waxaad si fudud ku heli doontaa kalsoonidooda si aad ugu gogol xaarto abaalmarinta fudud ee mashaariic badan mustaqbalka.
Khibrad ahaan iyo hage ahaan, la taliyayaasha ugu fiican iyo faa'iidooyinka badankoodu waxay ka qaadi karaan inta u dhaxaysa $ 150 - $ 300 saacaddii shaqada horumarinta.
Markaad dhisayso faylalkaaga mashaariicda la dhammaystiray taasoo keentay faa'iido la xaqiijiyay oo waayo-aragnimo iyo aaminaad ah, waxaad ku fiicnaan doontaa inaad aado mashaariic qiimo go'an leh.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Sameeyo Lacag Wadista Wadista Lyft | Hagaha 2022
Habkan, waxaa lagu siin doonaa magdhow iyadoo loo eegayo moodooyinka aad dhisto oo aad dhiibto oo ku saleysan intee macaamiishaadu u malaynayaan in moodooyinkaagu qiimo leeyihiin.
Maxay yihiin Goobaha ugu Fiican ee Ku Siiya Lacag si aad uga Jawaabto Su'aalaha Excel?
Waxaa jiri kara waqtiyo aad rabto inaad ka dhisto buugaagta shaqada Excel meel xoq ah oo aad u baahan tahay xoogaa caawimaad ah.
Haddii aad nasiib leedahay, waxaa jiri kara sheybaarro jira si aad u kala doorato meesha aad ka isticmaasho menus -ka caawinta raadinta ee barnaamijyada la rakibay ama si ka sii fiican weli ku feer weedha “Ka raadi shaybaarrada internetka” mashiinnada raadinta.
Meesha aysan jirin sheydo waxtar leh oo la adeegsado, waxaad kaliya bixin doontaa qof si uu kuu dhiso mid, sidoo kale loo yaqaan shaqo kiro. Markaa, meelaha, ee aad ku soo dhejin karto mashaariicda noocaan ah, ayaa inta badan ah kuwo deyrar leh.
Si kastaba ha noqotee, dhowr degel ayaa jira halkaas oo aad ku dhejin karto dhibaatooyinka aad haysato si aad uga soo jiidato xalka khubarada.
Halkan, xalalka la soo bandhigay waxaa ka mid noqon kara qaacidooyin adag, oo ka caawinaya qaabaynta, iyo hababka tallaabo-tallaabo ee isticmaalka astaamaha Excel qaarkood ee la xiriira dhibaatada aad rabto inaad xalliso.
Sidoo kale, meesha aad u baahan tahay macro, xoogaa xoogaa ayaa gacanta ku haya si aad u qorto, tijaabiso oo ku barato sida loo isticmaalo.
Si kastaba ha noqotee, meelaha la yaqaan ee laga yaabo in lacag lagu siiyo si looga jawaabo su'aalaha sare waa:
Dhoola-tusyadan, oo lagu doodi karo, waa aaladaha ugu wanaagsan ee wax-weyddiinta iyo ka jawaabista su'aalaha; waase gidaar lacag lagu bixiyo. Fikradda ' gidaarka mushaharka' macnaheedu waa in aad ama ka jawaabto su'aalaha dadka kale si ay shuruud uga dhigto helitaanka lacag la'aanta ah, ama haddii kale aad bixiso qadar aan caddayn bishii kasta xubinnimada.
Midkani waa goob bilaash ah oo ay ku shaqayso Microsoft laakiin ugu horrayn adeegsadayaashu waxay u jihaysan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, goob kale oo Microsoft ah, oo la yiraahdo TechNet, waxaa loogu talagalay horumarinta. In kasta oo aan laguu oggolayn inaad ku dhejiso faylasha goobta, waxaad koobi kartaa oo aad dhejin kartaa xiriiriyeyaasha faylashaada ku kaydsan daruuraha (tusaale, OneDrive, Dropbox, iwm.)
XIDHIIDHKA: 10 Shaqooyinka TEFL ee ugu Lacagta Badan 2022
Sida Jawaabaha Microsoft, kani sidoo kale waa goob bilaash ah oo ku takhasustay su'aalaha Excel. Mar labaad, sida Jawaabaha Microsoft, si toos ah uma soo dhejin kartid faylasha marka laga reebo kuwa meel kale lagu kaydiyo daruuraha.
Guud ahaan, xaashiyaha xisaabta ayaa si weyn loo aqbalay si loo sameeyo xisaabinta, duruufaha gelitaanka xogta, falanqaynta tirakoobka, iwm.
Waxaa xiiso leh in daraasaduhu muujinayaan sida ku dhawaad ​​82% shaqooyinka maanta ay ugu tiirsan yihiin xirfadaha ama waayo -aragnimada Excel iyo softiweerka wax -soo -saarka.
Doorarka shaqo ee caadiga ah ee kuu suurogalinaya in lagu siiyo lacag si aad u samayso xaashiyaha heer sare ah waxaa ka mid ah kaaliyayaasha maamulka, qiimeeyaha kharashka iyo/ama doorarka falanqeeyaha maaliyadeed, falanqeeyayaasha xogta, hantidhawrka, iwm.
Adigoo ah hage khabiir adag oo ku dallaca adeegyadaada sida xirfadle heer sare ah, waxaa lagugula talinayaa inaad tixgeliso inta u dhexeysa $ 150 - $ 300 saacaddii shaqada horumarinta.
Intaa waxaa sii dheer, waxaa jiri kara waqtiyo aad rabto inaad ka dhisto buugaagta shaqada Excel meel xoq ah oo aad u baahan tahay xoogaa caawimaad ah.
Isku soo wada duuboo, waxaa jira goobo cajiib ah oo aad ka heli karto shaqooyin kuu suuragelinaya inaad lacag ku hesho si aad u samayso xaashiyaha heer sare ah. Goobaha noocan oo kale ah si fudud ayaa loo googooyn karaa waxaana ka mid noqon kara Isweydaarsiga Khubarada, Jawaabaha Microsoft, Mr. Excel, iwm.
15 Trackers Portfolio Portfolio Stock Online oo Bilaash ah
Tiller Money Review: Ma sharci baa mise waa khiyaamo | Sidee U Shaqeeya?
15 Kaydka Dhabarka Ugu Raqiisan Rajo Weyn
20 Siyaabood oo Lacag laguugu siiyo si aad uga jawaabto Su'aalaha | Samee In ka badan $ 5,000/bishii
43 Qodobbada Awoodda leh ee Xorriyadda 2022
Dadka adduunka oo dhan ayaa u qulqulaya Vancouver si ay halkaas ugu noolaadaan sababtoo ah waa mid ka mid ah…
Kuleejku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nolosha dad badan. Waa waayo-aragnimo ka duwan kuwa kale. Waad taagan tahay…